Lesi sihloko kwenza kube nokwenzeka ukuba uthole ulwazi mayelana ngaziphi izindlela iyokwenziwa osungulwe futhi walondoloza ezizimele GSM-alamu mkhosi. Leyo naleyo yunithi yalolu hlobo cishe njalo isebenza ngesisekelo module ekhethekile. Empeleni, kuba ifoni efanayo ephathekayo, kodwa ngaphandle ukhiye, isikrini bese kunjalo. Esikhundleni zalapho Banamathele main nezixhumi ibhodi for izinzwa. GSM-amamojuli zinikezwa bezinhlangano ehola emakethe bamaselula, ezifana Siemens futhi Motorola.
Sikhanyisiwe inani elikhulu ephezulu nokuvikeleka professional izinhlelo abakhiqizi angaphandle, yokufuna elinganiselwe anhlobonhlobo abathengi. Chaza izimiso zomhlangano amadivayisi ezinjalo cishe ziphinde zenzeke.
GSM-module ngezandla zabo
Ukuqonda izimiso eziyisisekelo ukusebenza lolu hlobo isignali kuyadingeka ekuqaleni ilungiselelo into GSM-ukufakwa. Amadivayisi sakhiwe control unit nge okukhiphayo abafanele amadivayisi alamu nezinzwa-imitshina. Lapho isimo alamu kwenzeka, idivayisi lingacushwa ukwenza izenzo ezithile. isilawuli okunjalo units ukusisingatha imibiko yezwi, thumela i-SMS-izaziso abanikazi izakhiwo evikelwe noma izaziso ezifanele ku zokuvikela iphethwe yi- bezomthetho.
Ngaphandle kwezinto ezibalwe ngenhla, GSM-alarm system uyakwazi isebenze ukukhanya isixwayiso uhlelo inhlabamkhosi futhi afeze imiyalezo mass ezinezindawo eziningi kanyekanye. Kuyadingeka ukucacisa izingxenye ukuthi lizofakwa. Ikhwalithi ukusebenza namakhono okuwuphawu kuzoncika kuphela unjiniyela.
Kubhekwe njengesibonelo zesikole ubukele GSM okuzenzela (alamu umgqekezi) e ezejwayelekile ephezulu liphumele wokwakha flat. Isinyathelo sokuqala ikhethwa zonke izinzwa kunesidingo. It is ngokuvamile ayethi ukulandeleka enezisebenzi, ezifana abahlengikazi. Uma uhlela ukuthuthukisa GSM-alamu mkhosi ngoba nokuvikelwa kwempahla ezimbonini noma kwezohwebo, ngaphandle idivayisi umsindo ukuthola uyophinde badinga determinant ukunyakaza nezinto zikagesi ukuthi ebucayi ukwethusa izingilazi eziphukile kanye izinzwa ukuze ukulawula intuthu kanye nokuxhumana ne odonsa ukuphi.
Izakhi abathola adlulisa isignali ye-GSM-module uma uvula iminyango yangaphambili, amawindi noma imizamo ukulimala zingene indawo evikelekile nganoma iyiphi enye indlela. Khona-ke, kuye isethi izilungiselelo, kusebenze inhlabamkhosi, isixwayiso ithunyelwa izinombolo zahlelwa afakiwe imishini ukukhanyisa noma ukwenza imisebenzi eminingana. Uma-GSM-alamu okuwuphawu ngezandla zakhe sebuqoqiwe afakwe kahle, kumele uyisebenzise isikhathi ngasinye ngaphambi kokuya ensimini ka into evikelwe.
Izinzwa Zebhungane I ingilazi zokugwema ukuphuka
Kulesi sigaba senze izinqumo phakathi nokwethenjelwa kanye nomklamo yobuhle. Lapho ekhetha ukubukeka impahla iwindi wokuqala kungenzeka zishintshe ngendlela ephawulekayo. Ngemva obandayo idivayisi inzwa kuyoba igridi esobala phezu ingilazi, okungase uma ubuka eduze ukubonwa.
Uma umonakalo ebusweni yonke inzwa ingilazi okuhambisa isibonakaliso le control unit, okuyinto kweso iqala ukwenza zonke izenzo ezingaphezulu kungenzeka. Ukuze ukumosha ukubukeka kobuso igridi, entsha audioizveschateli yangaphakathi esetshenziselwa ukufakwa, okuyinto ithunyelwa iwindi. Amadivayisi anjalo bathambekele nihlabe umehluko awubufakazi phakathi kwephuka ingilazi futhi yiziphi ezinye izinto.
GSM-alamu waqhweba usethe usebenzisa amadivayisi ukuthola intuthu uhlale zamanje zonke izinhlobo amasayithi evikelwe. Kungcono ukufaka kumadivayisi angeziwe iwukudambisa umlilo. Lapho edala mkhosi ngezandla zakhe e, ungakwazi ukwengeza ezihlukahlukene omkhulu amadivayisi. Kufanele kuqondwe ukuthi isibalo Slots ku-GSM-module kungagcini, futhi isinqumo kuhlale ukwenzani ingqondo.
Endlini inzwa inhlangano sokunquma ukunyakaza kungaba kwenziwe emakhishini, izindlu zangasese noma ephasijini. Izenzo yimuphi umuntu ayezama ukungena isakhiwo ngaphandle kwemvume umninindlu noma umuntu loMkhandlu ibhizinisi, uzobe ngokushesha ibalwa namadivayisi ekhethekile alamu.
GSM-alamu mkhosi, ngezandla zakhe ukufaka, ngaso sonke isikhathi sidinga ukukhetha izindawo ngenxa control unit kanye antenna. Uma ukuhlanganisa ke nzima, umtshina kumele ibekwe eduze ngangokunokwenzeka ngefasitela. Uma-antenna kuyinto ephathekayo, it bazocula ukufakwa esifundeni engcono reception isiginali kusuka esiteshini main. I-control unit kulesi simo kungenziwa aboshelwe indawo ekahle kunazo. ukufakwa ezinconyiwe ezindaweni odongeni ukuthi kukhona ezingafinyeleleki izingane ezincane.
Ukusebenzisa umakhalekhukhwini ubudala
ukuthuthukiswa Technology silula. Inkinobho 1 isithonjana ifoni rekhoda ephathekayo. Ukuze eliyifa isikhathi eside engafinyelelwa ku- inombolo ohlwini ngaphambili. Ngokwalesi simiso usebenza GSM-alamu mkhosi.
imiyalelo Ukufakwa idivayisi yeselula ikhona into enkulu. Processor aqalaze isimo inkinobho. Imininingwane Ukuvalwa kungahlobani nanoma yimaphi ongaphakeme amandla optocoupler.
Ingqikithi okukhipha ihlinzekwa koxhumana naye phakathi, ezingeni isignali uyahlolwa. osenyameni kagesi kusukela izakhi zangaphandle kunesimo nge busebenze ifoni. Optocoupler fluster oxhumana babashayeli esifushane futhi eqondiswa mobile.
inkinobho oluvundlile Small obujwayelekile isetshenziswa ukwenza umsebenzi ukhiye 1. Lapho ishayela ifika ku ucingo. I zokubhalisa ungezwa konke okwenzekayo egumbini, ngokucindezela reception ucingo. ishaja Ordinary efanelekayo powering an mobile phone ehlangene.
GSM - umgqekezi alamu wesifunda efakwe lokuhlanganisa
Le ndlela kwenza isicelo kuwuphawu lokuthi sidla ukuzwakala kumadivayisi alamu. LM311 comparator okukhipha ngeke ngemuva kwesikhathi esithile ngemva amandla setha epholisayo 7 volts. Ngemva kokuqala comparator e isiqondiso esivela Resistor yamanje photocoupler lunikezwe. Ngakho ucingo.
Ngosizo a Resistor ungalungisa ubude ukubambezeleka ukusebenza kwawo comparator. Lokhu enikezwe ukuze avimbele ubala ngesikhathi ijika emfushane alamu. conjugation isikimu ibekwe ebhodini amancane efakwe nge avtozaryadnikom kwelinye izindlu.
Kungase kuphakame izimo lapho kuthwetshulwa iphasiwedi ezeba esheyininikhiye umnikazi nokhiye noma ukwambula ukuze ungalokothi GSM-alamu mkhosi icushiwe. Izandla zakhe, noma ubani angaba ukudala sekretki okuthiwa. Kulula ukuxhuma. kudivayisi Imininingwane ngoba LED amandla okukhipha kuya wesifunda esibonakalayo. Uma ungenalo cindezela inkinobho imfihlo, ucingo senziwa ngemuva kokuqala injini phakathi amandla capacitor isethi.
Lobu buchwepheshe isetshenziselwa kuphela imoto alamu izifunda. Okugcwele hf-uhlelo kungasetshenziswa esikhundleni ishaja. Amadivayisi anjalo ukudla kanye yasibamba amafoni, ukwandisa izinga zokuxhumana ngenxa antenna, ezimbili ngendlela wocingo.
CARK91 uhlelo yasekuqaleni ingasetshenziswa Nokia. Kufakiwe GSM-alamu okuwuphawu ngezandla kuzokwenziwa ngcono sibonga kule divayisi. Iyanezela ikhono auto nezimpendulo. Lapho umthamo ubuncane ukubeka zonke bekuzwa ngokucacile okushoyo. Umbhobho ku gumbi. Uhlelo zingafakwa emnyangweni ukuze mlilo.
Ekugcineni kuwufanele amagama ambalwa mayelana kumele ubukeke kanjani eqoqwe GSM-alamu mkhosi ngezandla zakhe. Isikimu ngempela zihlanganisa zonke izinzwa ngenhla. Imitshina kanye alamu kufanele uxhume kahle nge emachwebeni isofthiwe mojuli.
Faka uhlelo ekhaya kuyadingeka ngaphambi umsebenzi wokulungisa usuphothuliwe. Kwesinye isimo, kufanele acele usizo lochwepheshe, ukuze ngingasebenzisi ukudala izinkinga ezengeziwe ngokwabo. Ngemva shtrobleniya izindonga uhlale eziningi ukwakhiwa doti, ukungcola nothuli egumbini lokuphumula.
Obustrivaem ukuphila ezweni lakhe: umgodi abakhwabanisi ngezandla